Dadka ayaa kasoo wada baxay dhismayaasha ayaga oo naxsan islamarkaana aqrinaya aayado ka mid ah qur’aanka.
Dhulgariir xooggan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 7.5 ayaa ku dhuftay waqooyiga dalka Afghanistan, waxaana uu ruxay magaalooyin badan oo ku yaalla Koonfurta Asia.
Gilgil xooggan ayaa laga dareemay magaalooyinka Kabul, New Delhi iyo Islamabad maanta. Dalka Pakistan, darbiyada ayaa gilgishay, waxaana dadka ay kasoo wada baxeen dhismayaasha ayaga oo naxsan islamarkaana aqrinaya aayado ka mid ah qur’aanka.
Dalka Afghanistan, mas’uuliyiinta caafimaadka gobolka ayaa xaqiijiyey in lix qof ay geeriyoodeen, ku dhowaad 70 kalena ay ku dhaawacmeen gobolka Nangarhar. Gobolka Kunduz, agaasimaha waxbarashada ayaa VOA u sheegay in 12 caruur iskuul ah ay ku geeriyoodeen magaalada Takhar, halka 35 kalena ay dhaawacmeen.
Dalka Pakistan, 40 qof ayaa geeriyooday, in ka badan 300 oo qofna waa dhaawac. Dadkaas badankood waxay ku sugnaayeen gobolka Khyber Pakhtunkhaw ee xuduudda la leh Afghanistan.
Tirada dhimashada iyo dhaawac ayaa waxaa aad looga cabsi qabaa inay intaas sare uga sii kacdo.
Xarunta saadaasha dhulka ee Mareykanka ayaa sheegtay in dhulgariirka cabbirkiisa uu yahay 7.5, uuna qoto ahaan dhirirkiisu ahaa 196 KM, kuna dhuftay koonfurta bari ee magaalada Feyzabad ee dalka Afghanistan.